Ì chere na Apple kwesịrị iwepụ MacBook Air afọ a? [Nyocha] | Esi m mac
Ì chere na Apple kwesịrị iwepụ MacBook Air afọ a? [Nghoputa]
Jordi Gimenez | | MacBook Ikuku
Anyị na-ekwu okwu ogologo oge banyere iwepụ MaBook Air na ntanetị nke ngwaahịa Apple, mana ọ na-eguzogide mkpochapụ ya na-ahapụ asịrị na nkwupụta ndị ga-ekwe omume banyere mkpochapu akụrụngwa na enweghị ihe ọ bụla. Mgbe Apple malitere MacBook ọhụrụ 12 nke anụ ọhịa ahụ n'afọ gara aga 2015, ọtụtụ n'ime anyị chere na ọ bụ ikpe ikpeazụ maka ihe a na-akpọ MacBook Ikuku maka ịdị mfe ya na ike ya, 12 XNUMX MacBook ọhụrụ ahụ dị ọkụ ma dị ike mana enwebeghị ike iwepu MacBook Air site na ngwa ahịa ngwaahịa Apple ruo taa ma ugbu a, anyị na-ajụ gị. Ì chere na Apple kwesịrị iwepụ MacBook Air afọ a?
N'okwu a, ajụjụ ahụ doro anya ma anyị chọkwara azịza ya doro anya. Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbagha azịza gị na nkwupụta ahụ, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na nkwupụta ahụ, mana n'ụkpụrụ na mgbe ogologo oge jiri MacBook Air dị na akwụkwọ ndekọ Mac, anyị chọrọ ịma mara echiche gị n'okwu a. Apple emeelarị nzọụkwụ mbụ ịhapụ 11 ″ MacBook Air, ị chere na ọ ga-ewepụ 13 ″ afọ a?
Ì chere na Apple kwesịrị iwepu MacBook Air?
achọghị m ịma
Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ụka na MacBook Air bụ ngwaahịa ntinye dị mma maka ọkwa Mac ma ha gbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri ha chọrọ, mana ọ bụrụ na kama iji MacBook Air a, Apple bidoro 12 ″ MacBook dị ka ihe ntinye ntinye - ọnụ ahịa ndị na - ma n'ụzọ dị otú a nye mgbali ọzọ na ọdụ ụgbọ USB C, wdg. N'ezie ọ dị mkpa na a na-ahazi katalọgụ Mac dị ugbu a ma hụ ihe ga-eme na nkwupụta ndị mere ụbọchị ole na ole gara aga site na Mark Gurman, bụ nke ọ buru amụma na WWDC ga-ahụ MacBook ọhụrụ, MacBook Pro ọhụrụ na mgbanwe na MacBook Ikuku ... Ọ bụ ezie na isiokwu nke June 5 anaghị ahụ Olee otú ọtụtụ n'ime anyị kwenyere na MacBook Ikuku kwesịrị wepụrụ si katalọgụ nke dị na ụlọ ahịa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Ikuku » Ì chere na Apple kwesịrị iwepụ MacBook Air afọ a? [Nghoputa]
Ee, kpochapụ Ikuku ma hapụ ụdị abụọ MacBook na MacBook Pro, na Pro ha kwesịrị ịhapụ ohere nke ịgbasa ebe nchekwa na nchekwa.
N'uche m, ikuku nke i7 na 512 ssd maka € 1700 jiri ya tụnyere 1700 nke isi MacBook Pro ma ọ bụ MacBook m7 256 mara mma. Ha ekwesighi ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe ha nyere MacBook na ọnụ ala
Zaghachi Pedro García
Ekwenyere m ma ọ dị m ka nzuzu na Apple kpebisiri ike itinye anyị ọdụ ụgbọ mmiri ọhụụ mgbe ọ ka bụ teknụzụ na-enweghị isi, Macbook nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri bụ egwuregwu. Mụ onwe m na-eche na Ikuku dị mma n'oge ahụ.
Zaghachi Juan Ma Noriega Cobo
Ọnụahịa ọnụahịa dị m ka apụl kacha mma n'oge a.
Echere m na MacBook 12 dị oke ọnụ maka akụrụngwa ha bụ na Macbook Pro bụ akụrụngwa maka ndị ọkachamara.
N'uche m dị umeala n'obi maka ndị ọrụ kwa ụbọchị, anyị na-eji okomoko.
Gaspar Cobos placeholder oyiyi dijo
Noooo, ezigbo ndị otu m dị umeala n'obi.
Zaghachi na Gaspar Cobos
MacBook Ikuku na-eme karịa maka obere ego. Ibuju buru ibu (13 na 12). Ọbụna na arọ ya "dị arọ" karịa nke MacBook 12-anụ ọhịa, ọ dị fechaa (ọ gaghị ewepu hainia). Igodo sara mbara, dị ọsọ ọsọ ma nwekwuo nkasi obi maka ide ihe. More ọdụ ụgbọ mmiri (USB, mkpa maka arụpụtaghị). Ọnụ ala. Gini mere anyi ji agha iwe Mac?
Alvaro Martins ndozi ebe dijo
Mac akwụkwọ pro bụ ihe kachasị mma anyị nwere maka ndị ọrụ chọrọ ọkụ, ngwa ngwa na ịnweta ngwa. Enwere m mac akwụkwọ pro 13 na mmetụ aka na anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla ọzọ
Zaghachi Alvaro Martins
Kporie Billiards na Mac gị na Billiards
Okwu Mills na-enye anyị ndebiri 150 maka Isi Okwu